मनोरञ्जन​ | Digital Dainik
गाउनको डिजाईनमा कमजोरी भएपछि मिस नेपाल खतिवडा र्‍याम्पमा हिड्न सकिनन्
गाउनको डिजाईनमा कमजोरी भएपछि मिस नेपाल खतिवडा र्‍याम्पमा हिड्न सकिनन् काठमाडौं, मंसिर ६ : मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको ६८ औं संस्करण चीनमा आयोजना भइरहँदा नेपालीहरुको ध्यान मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडामा केन्द्रित छ । विगतका नेपाली प्रतिस्पर्धीहरुको तुलनामा उनीबाट बढी आशा गरिएको छ । ८ डिसेम्बरमा हुने मुख्य प्रतियोगिता अगाडि केही फास्ट ट्रयाक इभेन्टहरु हुन्छन् । यसमा जित्नेहरु सिधै क्वर्टरफाइनल (टप ३०) मा पुग्छन् । जसमध्ये टप मोडल कम्पिटिसन र बेस्ट डिजाइनर कम्पिटिसन भइसकेका छन् । मल्टिमिडिया, एड टु हेड च्यालेन्ज र ब्यूटी विथ प्रपोज जारी रहेको छ । सर्वोत्कृष्ट मोडेलको उपाधि फ्रान्सकी सुन्दरी माइभा कोउकेले जितेकी छन् । यससँगै उनी टप …
​मिस नेपाल २०१८ बनिन् शृङ्खला खतिवडा
​मिस नेपाल २०१८ बनिन् शृङ्खला खतिवडा काठमाडौं, चैत २९ः मिस नेपाल २०१८ को उपाधि श्रीङ्खला खतिवडाले जितेकी छन् । काठमाडौमा बुधबार राति भएको प्रतियोगिताको फाइनलमा निर्णायकको अन्तिम प्रश्नको जवाफ दिदैं खतिवडाले मिस नेपालको ताज पहिरिएकी हुन् । उनलाई मिस नेपाल २०१७ निकिता चाण्डकले ताज पहिर्याइदिएकी थिइन् । उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा आर्किटेक्चर पढेकी हुन् । श्रीङ्खला एमाले नेता तथा सांसद बिरोध खतिवडाकी छोरी हुन् । उनले मिस नेपालसहित पपुलर च्वाइस र मिस फ्यासिनोको पनि उपाधि जितिन् । यस्तै, मिस नेपाल यूनिभर्स र मिस ग्ल्यामरको उपाधि गोरखाकी मनिता देवकोटाले जितिन् । मिस नेपाल अर्थको ताज जितेकी …
​सलमान खानलाई ५ वर्षको जेल सजाय
​सलमान खानलाई ५ वर्षको जेल सजाय काठमाडौं, चैत २२ः कालो हिरण मारेको आरोपमा सलमान खानलाई पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । जोधपुरको अदालतले सन् १९९८ मा सलमान खानले चलचित्र ‘हम साथ साथ हे’ का छायांकनका दौरानमा कालो हिरण मारेको आरोपमा सलमानलाई सजाय सुनाएको हो । सलमानलाई पाँच वर्षको जेल सजायसँगै १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । सलमान खानलाई सेन्ट्रल जेल पठाउने तयारी भैरहेको छ । अदालतको फैसलाप्रति सलमान खानले अपील गर्न सक्नेछन् । सलमान खानलाई जोधपुरमा रहेको सेन्ट्रल जेलमा राखिने बताइएको छ । जहाँ आसाराम बापुलाई राखिएको छ । यही मुद्धामा अन्य कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे तथा …
उत्तेजक प्रस्तुती दिने ज्योति मगरमाथि लाग्यो यस्तो प्रतिबन्ध !
उत्तेजक प्रस्तुती दिने ज्योति मगरमाथि लाग्यो यस्तो प्रतिबन्ध ! सुनसरी, चैत २०ः वैशाखको पहिलो साता सुनसरीको इटहरीको तालतलैयामा हुन लागेको महोत्सवमा गायिका तथा कलाकार ज्योति मगरलाई प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । ज्योतिको उत्तेजक प्रस्तुतिले महिला हिंसाको घटनालाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले उनको उत्तेजक प्रस्तुति रोक्नका लागि उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइने इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा आयोजित हिंसा न्यूनीकरण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले उच्छृङखल प्रस्तुतिले समाजमा विकृति निम्त्याउनुका साथै हिंसालाई प्रश्रय दिने भन्दै त्यस्तो कार्यका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले कुनै पनि …
‘शत्रु गते’को ट्रेलर रिलिज, थाहा पाउनुहोस् कसको भूमिका के ?
‘शत्रु गते’को ट्रेलर रिलिज, थाहा पाउनुहोस् कसको भूमिका के ? काठमाडौं, फागुन १८ः प्रदीप भट्टराईले निर्माण गरेको दोस्रो निर्देशन रहेको सिनेमा ‘शत्रु गते’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सिनेमाको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । ट्रेलरमा सिनेमामा मुख्य कलाकारहरुलाई देख्न सकिन्छ । ट्रेलर हेरिसकेपछि सिनेमामा अनिभेत्री प्रियंका कार्की प्रहरीको भूमिकामा र आँचल शर्मा नर्सको भूमिकामा रहेको थाहा पाउन सकिन्छ । शत्रुहरुलाई पराजय गर्ने विशेष एकदिनलाई मुख्य विषय बनाईएको चलचित्र ‘शत्रु गते’मा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, शिवहरि पौडेल, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, पल शाह, …
चर्चित भारतीय नायिका श्रीदेवीको निधन काठमाडौं, फागुन १३ः वलिउड नायिका श्रीदेवीको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको छ । ५४ वर्षीया उनी श्रीमान् बोनी कपुर र कान्छी छोरीसँग आइतबार विवाह कार्यक्रममा सहभागी हुन दुबई पुगेकी थिइन् । श्रीदेवीको अचानक मृत्युको खबरले बलिउड जगतका प्रसंशक स्तब्ध भएका छन् । श्रीदेवीको जन्म १३ अगस्ट १९६३ मा तमिलनाडुमा भएको थियो । हिन्दी सिनेमा जगतमा श्रीदेवीको निकै ठूलो योगदान छ । सन् १९६३ तमिलनाडुको शिवकाशीमा जन्मेकी श्रीदेवीले हिन्दीका साथै तेलुगु, तमिल, कन्नड र मलायमी फिल्ममा पनि काम गरेकी छिन् । सन् २०१२ का उनले इंगिलश–विंगलिशमार्फत बलिउडमा कमब्याक गरेकी थिइन् । श्रीदेवीले …
तरकारीवालीलाई कसले दियो सेतो गुलाब ?
तरकारीवालीलाई कसले दियो सेतो गुलाब ? काठमाडौ, फागुन ३ः आउँदो बैशाख २८ लाई प्रदर्शन मिति तय गरेको फिल्म ‘लम्फू’का पोस्टरहरु सार्वजनिक भएका छन् । निर्माण टिमले फरक फरक प्रकृतीका तीन पोस्टर एकसाथ सार्वजनिक गरेको हो । जसमा लिड कलारकारहरुलाई राखिएको छ । तीनवटै पोस्टरमा नवनायक कबिर खड्का अटाएका छन् । एक पोस्टरमा कबिर एक्लै देखिएका छन् । अन्य दुई पोस्टरमा भने कबिरको साथमा अन्य कलाकारहरु छन् । अर्को पोस्टरमा तरकारीवालीको नामले संसारभर भाईरल बनेकी कुशुम श्रेष्ठ पनि छिन् । कुशुमले हातमा सेतो गुलाबको फुल लिएकी छन् । उनिसँगै नायिकाद्वय मरिस्का पोखरेल र चाँदनी शर्मा साथै अभिनेता सलोन बस्नेत पोस्टरमा …
विमलको ‘रुपको झड्का’ लाई दर्शकले मन पराए (भिडियो)
विमलको ‘रुपको झड्का’ लाई दर्शकले मन पराए (भिडियो) काठमाडौं, माघ २७ः ‘घरबेटी बा’ बोलको यथार्थपरक गीतबाट चर्चा कमाएका युवा गायक विमल गौतमले ‘रुपको झड्का’ गीतबाट थप चर्चा कमाएका छन् । मोडल एवं नायिका एलिसा राईले मोडल तथा कोरियोग्राफर गम्भिर विष्टको टिमलाई भिडियोमा उतारेर विमलले संगीतप्रमीहरुलाई नयाँ स्वाद चखाएका हुन् । एक दर्जन बढी गीत श्रोतामाझ ल्याइसकेका बिमलको गीतमा एलिसा र गम्भीरको दमदार डान्स हेर्न सकिन्छ । बुढासुब्बा म्यूजिक कम्पनीमार्फत युट्युवमा सार्वजनिक गरिएको गीतमा गायक आफैँले संगीत गरेका छन् भने आफैंले प्रकाश श्रेष्ठसँग सहकार्य गरेर गीतको शब्द तयार पारेका छन् । एलिसा र गम्भिरसँग नृत्यमा …
निर्देशक राजेन्द्र खड्गी पक्राउ, यस्तो छ कारण ?
निर्देशक राजेन्द्र खड्गी पक्राउ, यस्तो छ कारण ? काठमाडौँ, माघ २६ः प्रहरीले कलाकार तथा चलचित्रका द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गीलाई पक्राउ गरेको छ । दक्षिण कोरियामा विभिन्न नाटक, वृत्तचित्र र चलचित्र बनाउने भनी कलाकारका नाममा विभिन्न व्यक्तिलाई पठाई उतै लुक्न लगाउने गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले खड्गीलाई आज ठमेलबाट पक्राउ गरेको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा पाँच दिनका लागि म्याद थप भई खड्गीमाथि आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ । केही दिनअघि विभिन्न …
प्रवासबाटै लोकसंस्कृती बचाउन गायक छन्त्यालको यस्तो आग्रह ? (भिडियो)
प्रवासबाटै लोकसंस्कृती बचाउन गायक छन्त्यालको यस्तो आग्रह ? (भिडियो) काठमाडों, माघ १४ः प्रवासमा रहेर पनि निरन्तर नेपाली लोक सस्कृतिको क्षेत्रलाई माया गर्ने लोक तथा दोहोरी गायक युवराज छन्त्यालले आफ्नो नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । छन्त्यालले “बाजा बजाउदै” नामक गीत ल्याएर पुन दर्शक श्रोतामाझ आएका हुन् । उनको नयाँ गीत “बाजा बजाउदै देश बिदेशमा हामीले नचाउने, हामीले नै हो सुन साहिली संस्कार बचाउने ” बोलको गीतले उनलाई थप उचाईमा पुर्याउने विश्वास लिईएको छ । गीतले आफ्नो देशको संस्कृती र रितीरिवाज जहाँ गएपनि महत्वपुर्ण हुने र त्यसलाई बचाउन आवश्यक रहेको सन्देश दिन खोजेको छ । गीतमा चर्चित लोकदोहोरी गायिका देवीका केसीले साथ …